izikali Electronic-trade namuhla abagcini nje kuphela ukusiza ukunquma nenqwaba umkhiqizo, enze imisebenzi wokubala, abale izindleko zokukhiqiza, ukugcina inani ukuthenga kwangaphambilini, intengo ukuphrinta amathegi, kodwa futhi usebenza eziyinxanxathela kwimodi self-service, futhi ngokwanele kabanzi ukusatshalaliswa nokupakisha izikhungo, emafektri nokunye.
izikali Electronic ihlukaniswa njengoba zokuhweba, isitoreji (ukuhweba), portioned (nokupakisha). Ngo yesimanje umkhakha uhlu ukuhweba abathintekayo enesisindo imishini kahle esikhulu. Ungakhetha yonke izici ezintathu eziyinhloko kwesicelo.
izikali Electronic-trade asetshenziswa izitolo. Ngokuyinhloko lokhu amadivayisi uhlelo enelebuli ukuphrinta umsebenzi, ibhekwa imali nge ikhono ukuxhuma pos-ezikhumulweni. Izikali avame ukusetshenziswa ezindaweni ukwamukelwa kwezimpahla kanye emafektri.
Ngokucacile umsebenzi isidingo uxhumana nge emaphaketheni kuqhathaniswa esindayo futhi okukhulu kakhulu. Ngenxa yalesi sizathu, ezikhungweni ezinjalo kukhona ukusetshenziswa yesikhulumi izikali nge umthamo ezahlukene kanye nosayizi. Ngaphezu kwalokho, abanye abathengisi elisetshenziswa ukulethwa phansi izikali electronic ngophawu sokuphatha izimpahla ezingenayo kophawu amakhono. Futhi enesisindo imishini esetshenziswa at yokugcwalisa iziteshi e tekusabalalisa kanye nezitolo ezinkulu.
Esikhathini emafektri ezisebenza cishe njalo imishini yakhelwe imithwalo kuze kube kg 600, kanye electronic izikali phansi isisindo kuka-600 kg.
Ngokusho kochwepheshe abaningi, kokokusebenza isisindo njalo kuncike ngqo iphuzu usayizi ukusatshalaliswa, isabelo sezimali salo kanye nezidingo. Ngo ezitolo ezincane, izimakethe kanye nezinye zinsiza ezincane, lapho imikhiqizo Bathengisa ekhawunteni, zivame kakhulu babesebenzisa izikali ukuhweba ngogesi lokuboniswa kabili emaceleni. Imishini enjalo ibala ukubaluleka izimpahla, intengo unezela izinhlobo eziningana imikhiqizo okwesikhashana, inquma isisindo esitsheni kuveza izibalo ukulethwa. Ngo Hypermarkets enkulu, isibonelo, imishini okwandile ekunyatheliseni ilebula. izikali okunjalo asetshenziswa ngokugcwalisa izitolo, ukuyothenga amahholo, kanye nezitebele zamahhashi izinhlanzi kanye inyama neminyango.
Izikali lezimpahla emaphaketheni electronic ezahlukene kwezicelo. Amadivayisi yalolu hlobo avame ukusetshenziswa lapho kwenziwa ukukhiqizwa kokudla, ezitolo lokugoqa imikhiqizo iIgama izikhungo kuncike portioning ubuchwepheshe ukudla ibalazwe zobuchwepheshe.
Ukugcwalisa nokubala ezisetjenziswako enqubeni yokukukala ucezu izimpahla. Ngo ezitolo ze-non-ukudla, isibonelo, izikali ibhodi electronic ngokunemba high okupakisha ngoba nuts emabhokisini nezikulufi nezinye izakhi hardware. Ukugcwalisa laboratory ezisetjenziswako embonini zamakhemikhali, ikakhulukazi for Pharmacy olunembile enesisindo kanye nokulungisa izidakamizwa. Kulezi Isikali esikhohlisayo siyinto umsebenzi elula kakhulu kukhawulela ikhono ukushintsha nesilinganiso kuphesenteji futhi alinganise Carat nokubala imodi. Linganisa isisindo eyalo kokunikeza isignali umsindo ngokusazisa ukuthi predetermined mass edingekayo sezempi.
Izikali for ishede
Emafektri esetshenziswa imishini emisha for enesisindo lebhalwe amalebula. Ngokokuqala ngqá uchungechunge izinsimbi ezihlongozwayo ekuqaleni kuka 2008. Isidingo ukuthuthukisa lolu hlobo okokusebenza nje isuke ibangelwa isidingo yokukhiqiza izinkampani kanye emafektri e ibhalansi nge platform emikhulu futhi esiphezulu enesisindo komkhawulo kophawu nokupakishwa imikhiqizo. Izikali lezimpahla electronic ekunyatheliseni ilebula ukwenza kube lula ukwenza iqoqo izimpahla.
Izikali ezitolo ezincane
Ngo encane amahholo ukuhweba noma ezitolo nge endaweni encane kwanele ukusebenzisa imishini nge imishini ubuncane sokusebenza. izikali okunjalo yakhiwa platform kanye ukubuka nomthengisi kanye umthengi ungabona isisindo futhi ukubaluleka izimpahla. Ezimakethe amadivayisi ezinjalo esikhathini esiningi iphrezenthe ukukhiqizwa engabizi ukwakhiwa zasekhaya noma Chinese.
Izikali, ibhodi electronic ezitolo ezinkulu
Ngo ezisekelweni ezinkulu zokuhweba ezisebenzisa ibha esephepheni, wasebenzisa imishini eyinkimbinkimbi kakhulu - pos-izikali imali noma idivayisi chekopechatju ukusebenza endaweni yokuthengisa. Imishini enjalo kuyingxenye ilwazi ezivamile futhi izitolo izinhlelo kunezinzuzo eziningana, ukuvumela ukuhlela ngendlela efanele inqubo yokuhweba.
Ngosizo akude ukuphatha imisebenzi njalo agcwalisa futhi ubuyekeze izinsimbi egciniwe ngaphandle kokuphazamisa ukusebenza. Speed yesevisi izokwenyuka kanye nokutshalwa abathengisi kuyafaneleka. Ngaphezu kwalokho, umklamo imishini uphelele ngaphezulu.
Ngaphandle salesrooms izikali for enesisindo imikhiqizo nazo asetshenziswa lapho ukwamukelwa kwezimpahla. Kube wasebenzisa platform elula ukumisa ifoni ye-, kanye eziphambili esibulalayo uyakwazi kahle yokudlulisela nokwamukela ulwazi supply kwezimpahla.
Umgomo we operation esikalini ngogesi
I electronic imishini enesisindo kungenxa inzwa idluliselwa ku umthwalo isignali inkomba. Isihloko bonke imithetho wokusebenza izikali enjalo oyohlala isikhathi eside. Into esemqoka - emsebenzini ukuthobela imikhawulo isisindo umkhiqizo. On esikalini nge umkhawulo kg 100 wezimpahla angeke nesisindo imikhiqizo 150-kilogram. Uma ungenalo ziyilalele izimo, ngokuhamba kwesikhathi, inzwa kungenzeka lilimele.
izikali Electronic for commerce kungenziwa exhunywe kwikhompyutha bese esetshenziswa njengengxenye wokulinganisa izinhlelo ezenzakalelayo.
Abanye onobuhle okhiye ashisayo PLU, okuyinto kusebenze inkumbulo iseli ngemali efakwe kilogram of umkhiqizo othize ngayinye. Ububanzi imikhiqizo kungaba esikhulu kakhulu, ngakho-ke, inikeza ikhono ehlelweni kuphela izindleko izimpahla ethandwa kakhulu. Zonke izenzo sehliselwe ukhiye oyedwa kuphela ngokucindezela.
Ngo kwamanye amadivaysi, eklanyelwe ne zokukhohlwa emangqamuzaneni okuthiwa isebenze ngokwethula ikhodi esiyingqayizivele bese ucindezela ikhi PLU.
izikali Electronic-trade ungase ube umsebenzi inkomba izimpahla ithengiswe. Lokhu kuvumela abanikazi esitolo ukuqhuba siqu ucwaningo lwabo ezimele emakethe, yakhelwe ukufeza kuthengwe, kusukela ekupheleni kosuku, ungathola idatha olunembile kakhulu isibalo izimpahla ezithile ithengiswe ngesikhathi sokusebenza.
Umehluko omkhulu phakathi ukuhweba izinhlelo self-service ezitolo usule iyona kophawu lomkhiqizo ngamunye. Idivayisi kunyatheliswa ilebula ngolwazi mayelana igama ukubaluleka izimpahla, intengo ngayinye kilogram, isisindo, isitoreji nezikhathi.
Izikali ukuhweba ngogesi ku esiphezulu umthamo enesisindo uhlukaniswe izigaba ezintathu eziyinhloko: 6, 15 no-30 kg. Eminyangweni lapho kuhlaziywe imikhiqizo ukukhanya, isibonelo amaswidi noma gastronomy, wafaka kumadivayisi eyenzelwe 6 kg. Lokhu kungenxa value division okuyinto 2 amagremu esikalini ezinjalo. Ngakho, izindleko kungenziwa imikiswe ngokunembe kakhudlwana. Izikali, eyenzelwe 15 no-30 kilograms, zifakwa ku inyama, inhlanzi nemifino neminyango. Ngo amadivayisi 15 kg division elilingana 4 g no-30 kg - 10 g.
Ngo ngokugcwalisa izitolo kudivayisi obukhethekile iphrinta ezishisayo asetshenziswa. Ngo ukuhweba amakamelo isethi izikali self-service. Lapho besebenza ngemuva zokubala of okokusebenza wabizela yilo nezidingo ezihlukile umnyango. Ngokwesibonelo, i-ukukhiqizwa izinhlanzi isetshenziswa kudivayisi okwesikhashana ukuphrinta ezenziwe ngensimbi engagqwali. UMnyango ukusatshalaliswa isebenzisa nokupakisha noma platform Ukuhweba amaphrinta ukwaziswa okufanayo.
AmaSu esikalini electronic ukuhweba zihlanganisa nemishini ekhethekile yokuthungatha athwebula eziningi imikhiqizo, ukondla ulwazi olufanele esibukweni digital. Izinzuzo elingenakuphikwa amadivayisi zibala kalula enesisindo izinqubo, ukuthembeka, ukucabanga okuzenzakalelayo yezindleko, esekelwe isisindo izimpahla kanye intengo kilogram per. Lapho kuqhathaniswa izikali mechanical, singaphetha ngokuthi imishini digital kukhona livikela kakhulu ukufuduka benza isiteji ukucindezeleka mechanical. Ngu amadivayisi injongo zihlukaniswa zokuhweba, impahla (emafektri) kanye emaphaketheni (portioned).
Bosch Impompi kaphethiloli: izici, idivayisi ukusebenza, kanye nokubuyekeza
Heater "Megador": ukubuyekezwa kanye Umhlahlandlela
Indlela ukukhetha umshini wokuthunga: ezinye izincomo
Phakamisa isitini somlilo: izintengo, izibuyekezo, ubukhulu
Scooter emithathu isondo, ezimbili-wheel drive noma phambi-wheel drive, ezimbili ezingemuva
Indlela ukulungiselela ukubonga yasesikoleni othisha
Kuthiwani uma ihlule uhlala kwesibeletho emva kokubeletha?
Indlela oda mikhondo inhlangano nalapho ukwenza uphawu?